एमसीसी पारित गर्न देउवा अघि बढे, प्रचण्डले साथ नदिने संकेत, के होला अब एमसीसी ? - ramechhapkhabar.com
एमसीसी पारित गर्न देउवा अघि बढे, प्रचण्डले साथ नदिने संकेत, के होला अब एमसीसी ?
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दृढ देखिएका छन् । उनले एमसीसी पारित गर्ने दृढता निकटस्थहरुसँग गरेको बुझिएको छ ।
आजै जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी पारित हुने ठोकुवा गरिसकेका छन् । उनले एमसीसी अगाडि बढ्ने भन्दै भ्रमहरु रहेको बताए । एमसीसी गठबन्धन सरकारकै पहलमा पारित गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाई थियो । तर, गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा छन् ।
प्रचण्डले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुने बताइसकेका छन् । माधवकुमार नेपाल पनि संशोधनको विषय उठाइरहेका छन् । यसकारण प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसीको पक्षमा उभिने सम्भावना न्यून भएको छ । तर, देउवा एमसीसी पारित गरिछाड्न दृढ देखिएका छन् । यसको संकेत उनका विश्वासपात्र समेत रहेका गृहमन्त्री खाँणले गरिसकेका छन् ।
देउवा एमसीसी पारित गर्न अगाडि बढिरहँदा प्रचण्ड र नेपाल तयार नभएकाले सत्ता गठबन्धन तोडिने सम्भावना बढेको छ । त्यसको खतरा स्वयं प्रचण्डले सोमबार सार्वजनिक रुपमा औल्याइसकेका छन् ।
नेकपा एमालेले एमसीसी पारित गर्न शर्त राखेको विषय बाहिर आएको छ । माओवादी र नेकपा एसलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याएमा एमसीसी पारित गर्न साथ दिने एमालेको शर्त रहेको चर्चा छ । प्रचण्डले पनि यसको खुलासा गरेका छन् ।
एमसीसी पारित गर्न साथ दिने या सत्ता गठबन्धन छाड्नुपर्ने चुनौती प्रचण्ड र माधव नेपालसामु आएको छ । देउवा ब्याक नहुने भएका छन् । यसको अर्थ प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसीलाई समर्थन नगरे सत्ता गठबन्धन तोडिने निश्चित भएको छ ।